Asian Artists (K,C,J,T) | Myanmar Mp3 Album | Page 2
Home / Asian Artists (K,C,J,T)
Category Archives: Asian Artists (K,C,J,T)
Elva Hsiao – Love their hands (MV)
Type : FLV (Sub) Artist : 蕭亞軒(Elva) Al buy generic cialis online withoutaprescription bum : 我爱我 / I'm Ready Year :2011 Size :21 MB
April 17, 2012 Puck Asian Artists (K,C,J,T) Jeremy Ji
Anson Hu-Men’s Karaoke (Pinyin and English Sub)
Type: WebM File (Mandarin, Pinyin, English Sub) Size :7MB Download
April 17, 2012 Puck Asian Artists (K,C,J,T) Leaveacomment
Leo Ku – King Of Love Songs(2) MV
Type: FLV video format (with Sub) Size: 28 MB This song is mixing withalot of great songs … I Like it very much ..wish you guys like too .. 🙂 Download
April 17, 2012 Puck Asian Artists (K,C,J,T) Media Leaveacomment
Michelle Obama သွားတိုင်မလားမိုင်နာပဲ (Playlist)
ကျွန်တော်အရင်က အိုဘားမားသွားတိုင်မလားမိုင်နာပဲ (Playlist) လုပ်ခဲ့တာအောင်မြင်ပါတယ်။ total views လည်းများပါတယ်။ အိုဘားမားသွားတိုင်မလားမိုင်နာပဲ (Playlist) ကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အခု Michelle Obama သွားတိုင်မလားမိုင်နာပဲ (Playlist) ထပ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီ Playlist မှာ သီချင်းအေးအေးလေးတွေ နောက် Pop, Rock လေးတွေထည့်ဖြစ်မှာပါ။ ဒေါင်းလင့်ခ်တွေကို နောက်များမှာထည့်ပေးပါမယ်။ Lady First အနေနဲ့ လေဒီသီချင်းတွေများများတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သီချင်းအပုဒ် ၂၁ ပဲအရင်ထည့်ထားပါတယ်။ နားထောင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ။
February 4, 2012 MMA Asian Artists (K,C,J,T) International Artist Myanmar Artist New Myanmar Albums 1 Comment
အိုဘားမားသွားတိုင်မလားမိုင်နာပဲ (Playlist)အကြောင်းနှင့် ဧရာစာလုံးမမြင်ရသူများ ဒီနေရာမှာ လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ (Playlist) ကမပြီးသေးပါဘူး။ အရင်တင်လိုက်တာပါ။ နောက်အားရင် သီချင်းတွေထပ်ထည့်ဦးမှာပါ 🙂 4shared Download Links 01 – Misunderstood – Twista 02 – လှမျးပိုငျဆိုတဲ့ငါ (လေဆငျနှာမောငျး) – လှမျးပိုငျ 03 – အဲ့ကောငျမလေး – Snare 04 – Check Out My Lean – Lil’ Shine 05 – High High – Big Bang (G-Dragon & T.O.P.) 06 – မိတျဆကျွပီးတော့ – ရဲလေး 07 … Continue Reading →
January 31, 2012 MMA Asian Artists (K,C,J,T) International Artist Myanmar Artist New Myanmar Albums3Comments
Brown Eyed Girls – Sixth Sense 4th Album
Artist: Brown Eyed Girls Genre: Dance Pop Language: Korean Release Date: 2011.09.23 File Size: 70MB Tracklist: 01.Swing It Shorty (Intro) 02.Sixth Sense 03.Hot Shot 04.La Boheme 05.불편한 진실 06.Lovemotion 07.Countdown (Interlude).mp3 08.Vendetta 09.Sixth Sense (Inst.) Link : Mediafire
September 26, 2011 mmsong Brown Eyed Girls Leaveacomment